Adin’i Rosia Ny Alin’ny Oscar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2014 2:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Deutsch, Français, English
Fa somary mahalasa saina, ny hany antony tokana mety nahafahana nanitsy ilay kabary voalohany indrindra, dia satria ilay lanonana tsy nalefa mivantana, tahaka izay efa niomanana tany ampiandohana. Ireo bilaogeran'ny RuNet dia nahamarika izany hatrany aloha tany, nanontany tena raha toa ka mety ho ny krizy Krimeana sy ny tahotra ny “fanozongozonana avy amin'ny tandrefana” no antony. Ora vitsy nialoha ny voatondro hanombohan'ny fampisehoana, ilay kingalahin'ny aterineto Rosiana, Anton Nosik, dia nanome rohy mankany aminà pejy Facebook [ru] an'ireo mpitsikera sarimihetsika Rosiana, izay noheverina hitantara ilay lanonana. Ilay mpitsikera, Yyri Gladilschikov, dia niteny fa nahazo antso avy amin'ny Channel One izy, nilaza taminy fa tapaka ny fifanarahana — na izany fandefasana mivantana, na ny fanehoankevitra. Miaraka amin'ny toe-draharaha henjana misy ao Okraina, nanoratra i Gladilschikov hoe tsy gaga tamin'izany, :
Nanontany tena i Nosik mikasika izay mety ho antony, tsy mividy izay manaitaitra tampoka avy amin'ny fahitalavitra fototra ao Rosia. Hoy izy nibilaogy[ru] hoe mety ho telo ny fanazavana azy: hetaheta hanitsy lanonana iray “saropady ara-politika” (tsy ny maivana indrindra satria Ellen DeGeneres; ilay lehilahy mitia lehilahy no nampiantrano izany ankarihary), ny hafa mamoaka ny hoe ho solon'io dia ny hetsika efa voaomana ao Crimée no mety hahazo ny fandrakofan'ny fahitalavitra Rosiana, na olana ara-teknika izay nahatonga ilay fampitàna mivantana tsy ho tanteraka. Nanomboka fitsapan-kevitra iray ihany koa i Nosik, hijerena hoe inona no mety ho ao an-tsain'ny maro amin'ireo mpamaky azy: